Sida loo Beddelaan MKV in VOB
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in VOB
Waa inay jiraan waqtiyo aad rabto in aad si loogu badalo MKV in VOB u gubanaya DVD disc ama daawashada cajaladaha on qalabka qaar ka mid ah MKV-leheyn laakiin VOB taageerto sida PS3. No arrinta sababta waxa ay tahay, waxaa jira qalab si sahlan loo isticmaalo inay kaa caawiyaan inaad ka MKV qaab si qaab VOB badalo filimada aad, xataa si toos ah kuu caawiyaan si DVD ah gubi MKV.
The dhan-in-mid app smart waa Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ), taas oo keliya ma kaa caawinaysaa in aad loogu badalo videos u dhexeeya qaab kasta oo caan ah, laakiin sidoo kale si toos ah kaa siinayaa awood ay ku gubi videos ku dhowaad qaabab oo dhan si ay u DVD. Tutorial soo socda ay u kala horreeyaan idin ​​tusiyo doono sida loo badalo MKV in VOB iyo in DVD gubi MKV la MKV fiican si Converter VOB. Just download iyo rakibi app, waayo, isku day ah.
Fiiro gaar ah: Hagaha hoos ku qoran waa ku saleysan madal Windows. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad riixi kartaa halkan: Guide Mac Users ' .
Tallaabo 1: Ku dar files MKV in MKV in ay Converter VOB
Waxaad saddex hab oo dabacsan si ay u dajiyaan files MKV si aad u app this.
1. Laga soo bilaabo menu ugu weyn, waxaad riixi kartaa "Beddelaan" tab ka dibna dooro "Add Files" "doorasho si ay u doortaan iyo files MKV dejinta ka PC barnaamijka.
2. Riix "Add Files" ikhtiyaarka in this app ee Murayaad bidix si ay u doortaan iyo dajiyaan files bartilmaameed ka your computer disk adag si ay u app this.
3. Jiid jeedi files MKV doonayay in barnaamijka.
Talaabada 2: Dooro DVD ama VOB sida qaab wax soo saarka si loogu badalo ka
In ka "Qaabka Output" Murayaad dhinaca Yamiintiisa ee interface ugu weyn, waxaa jira "Qaabka" l hoos-hoos. Just waxa ku dhacay inay galaan liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Halkan, waxaad u tagi kartaa "qaab"> "Video"> "VOB" qaab wax soo saarka. Ka dibna riix "Beddelaan" ee geeska sare ee midigta ah interface ugu weyn ee ay u badalaan files MKV in files VOB.
Fiiro Gaar ah: Wixii MKV in DVD diinta, marka hore, waxaad u baahan tahay in ay ku dhufatey "Guba" tab Tallaabada 1. Markaas, waxaad isticmaali kartaa siyaabo isku mid ah si ay u dajiyaan files MKV aad. Next, dooro template menu ee "Change Template" Murayaad guriga dhankiisa midigta ah, gelin DVD disc maran, oo ugu dambeyntii ku dhacay "Guba" si ay u bilaabaan DVD gubanaya.
Ok, kaliya tanuna ha Video Converter samayn waxyaalaha intiisa kale. Marka uu sameeyo, waxaad ka heli kartaa disc DVD la jecel yahay ama file a VOB la image la mid ah oo tayo leh dhawaaqa.
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan dhagax taariikhqorihii screen